Baazaarii fi Egzibiishiniin Irrechaa meeshalee fi Uffanni aadaa itti dhihaatu Finffinee Giddu gala Aadaa Oromootti geggefamee jira. Kichuu
HomeAfaan OromooRadioBaazaarii fi Egzibiishiniin Irrechaa meeshalee fi Uffanni aadaa itti dhihaatu Finffinee Giddu gala Aadaa Oromootti geggefamee jira.
Baazaarii fi Egzibiishiniin Irrechaa meeshalee fi Uffanni aadaa itti dhihaatu Finffinee Giddu gala Aadaa Oromootti geggefamee jira.
Agarsiisni kun shamattotaa fi bitattota wirtuu tokkotti walitti fidee haala gabaa mijeessun dabalata Indaastrii Aada guddisuu keessatti shoora olaana qaba jedhan hirmaattoni.
Muktaar Jamaal Baazaarii kana daawwatee waan qopheesse kunooti #Oromo #Ethiopia #Irreechaa2019
በአዲስ አበባ ለሚከበረው የኢሬቻ በዓል የታዳሚዎች ዝግጅት
Namoota Har’a Magaalaa Shaambuutti Alaabaan Mililik Hin Fannifamu Jechuun Morman Mana Hidhatti Argamu
የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ/ቅዴፓ/ ማዕከላዊ ኮሚቴ የአቋም መግለጫ